Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa taageeray jarista qiiqa korontada ee qiiqa: Warbixin - Wardeeq 24 TV Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa taageeray jarista qiiqa korontada ee qiiqa: Warbixin Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa taageeray jarista qiiqa korontada ee qiiqa: Warbixin
Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa taageeray jarista qiiqa korontada ee qiiqa: Warbixin
FILE - This Tuesday, Feb. 16, 2021 file photo shows power lines in Houston. When an unusually heavy winter storm blanketed much of Texas with snow, knocking out electricity to millions of homes and leaving many struggling to find clean water, one sector of the population was particularly vulnerable: inmates in Houston at the state’s largest county jail.(AP Photo/David J. Phillip, File)
Aqalka Cad wuxuu rajeyneyaa inuu ka faa’iideysto taageerada sii kordheysa ee korontada, ururada iyo kooxaha cagaaran ee Mareykanka si loo helo amar qaran oo tamar nadiif ah iyadoo lagu taageerayo dadaallada looga baahan yahay shabakadda awoodda Mareykanka inay 80 boqolkiiba awooddeeda ka hesho ilaha aan qiiqa ka sii deyn sannadka 2030, waayeel Sarkaalka maamulka ayaa u sheegaya wakaalada wararka ee Reuters.
Bartilmaameedka 2030 wuxuu noqon doonaa guul muhiim u ah wadada lagu gaarayo hamiga Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay ee ah qiiqa saafiga ah ee kaarboonka ee shabakadda sanadka 2035. Waxaa sidoo kale suuragal ah in la maro iyada oo aan la helin taageerada Jamhuuriga iyada oo loo marayo geeddi-socod loo yaqaan dib-u-heshiisiinta miisaaniyadda.
Shirka cimilada ee Biden: Miyuu hami kaarboonku hayaa xitaa ku filan yahay?
Joe Biden ma soo celin doonaa hoggaankii Mareykanka ee isbeddelka cimilada?
Biden wuxuu ku baaqayaa in wax laga qabto cimilada maaddaama Xi cusbooneysiinayo ballanqaad dhexdhexaad ah oo kaarboon ah
‘Taasi waa waali!’: Agaasimaha guud ee shirkadda Tesla Musk wuxuu siinayaa kaarboon saarista $ 100m kor u qaadis ah
Previous articleDagaal ayaa ka qarxay bariga Myanmar meel u dhow xadka Thailand
Next articleMusharaxiinta oo taageray Go’aankii Hirshabeelle, Galmudug iyo K/Galbeed